China Hermetic Tea Coffee Coffee Tin amathini ifektri abakhiqizi | E-Byland
Amathini wetiye nekhofi alinganiswa nalutho ekusimeni kweshalofu ngenxa yophawu lwe-hermetic oluvikela itiye nekhofi emoyeni, ekukhanyeni, emswakeni nasekungcoleni kwangaphandle. Sinezinketho ezimbalwa zokuphela ezitholakalayo ezibandakanya ama-EZO Ends, Peel Off Ends, Peel Off with Valve Ends, nezembozo zensimbi zokuhlobisa. Izembozo ze-snap zingaphrintwa futhi zifakwe embossed.
Ukupakisha okungu-100% okwenziwa kabusha kwekhofi netiye
Siyasiqonda isidingo sakho sephakethe lekhofi elenziwe kahle, elingena emoyeni elingabeki izaba uma kukhulunywa ngokusimama. Kuyinzuzo enkulu ukuthi ukufakwa kwensimbi kuvuseleleke ngokungenamkhawulo. Insimbi ihlukile ngoba ingavuselelwa kaninginingi ngaphandle kokonakala kwekhwalithi. Ifaka umnotho oyindilinga njengoba usuka ekwenziweni kwensimbi uye ekukhiqizweni uye kumthengi emuva kokuthengwa kabusha komthengi.
Lapho ithini seliphinde lasetshenziswa, lingaba yinoma yiziphi izinto: ingxenye yebhuloho, ugongolo lokusekela, ibhayisikili, umgqomo wokuhamba, inkundla yokudlala, elinye ikani lekhofi, njll. Lapho imikhiqizo yensimbi ilahlwa kude, iyalandwa udoti wokulahla udoti ngomazibuthe bese usetshenziswe kabusha ngendlela efanele. Ngenxa yalezi zizathu, izinga lokuvuselelwa kabusha kwensimbi belilokhu lisukela ku-70-90% njalo ngonyaka. Yinto engu- # 1 esetshenziswe kabusha kakhulu- ngaphezu kwe-aluminium, ingilazi, iphepha nepulasitiki kuhlangene!
Izinsimbi ezinamandla amakhulu ziholele ekwehliseni isisindo ngama-25 kuye kuma-40% kule minyaka engamashumi amathathu edlule, nokuncipha okuhambisanayo kokukhishwa nokusetshenziswa kwamandla. Kusukela ngo-1900, imboni yensimbi yomhlaba isisebenzise kabusha amathani wensimbi angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama-24. Lokhu kunciphise ukusetshenziswa kwensimbi ngamathani angaba yizigidi ezingama-30 kanye nokusika ukusetshenziswa kwamalahle ngamathani ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-15. Imboni nayo inciphise ngendlela ephawulekayo ukusetshenziswa kwayo kwamandla. Ukukhiqiza ithani elilodwa lensimbi namuhla kudinga u-40% kuphela wamandla ebewenza ngo-1960.
Ngenxa yobuhle nokuqina kwawo, amathini ayalandwa, agcwaliswe kabusha, noma akhonjiswe emakhaya nasemabhizinisini. Amathini ekhofi angagcina ikhofi lomhlabathi noma ubhontshisi noma angaphenduka abe ngabaplaki, abaphethe ipensela, ama-rack racks, njll.
Amathini angavuselelwa ngokungenamkhawulo ngo-100% ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi. Akudingeki bagcine ngokulahla udoti.
Langaphambilini I-Custom Steel Coin Bank - China Umakhi webhokisi lemali lensimbi
Olandelayo: I-Metal Tin Cans-Container yokupakisha i-Car Wax ne-Polish
Metal tinplate ibhokisi ukupakisha amakhukhi-Biscu ...
Ithini elidonsa indandatho lokupakisha ukudla okunempilo i ...